Iindaba-Ngaba ufuna amandla ngakumbi, kodwa ngokukhawuleza? Le teknoloji intsha yokutshaja ibanga ukuba ingahambisa
Iintsuku zokugungqa ujikeleze izitena zamandla amakhulu kunye neentambo ezininzi zokugcina izixhobo zakho zijongana nazo zinokuphela. Ukulinda iiyure zokuba i-smartphone okanye ilaptop yakho ihlawuliswe, okanye ukumangaliswa yishaja eyoyikisayo esothusayo, isenokuba yinto yexesha elidlulileyo. Itekhnoloji ye-GaN ilapha kwaye ithembisa ukwenza yonke into ibengcono
"I-Silicon ifikelela kwimida yayo ngokwamandla kunye namanqanaba ombane," uGraham Robertson, isithethi seDigital Trends. "Ke, songeze itekhnoloji ye-GaN, eyinto ye-31 kunye ne-7 edityanisiweyo ukwenza i-gallium nitride."
"I-Silicon ifikelela kwimida yayo ngokusebenza kunye nenqanaba lamandla."
Inxalenye ye- "GaN" yeGaNFast imele i-gallium nitride, kwaye indawo ethi "Fast" ichaza isantya esikhulu sokutshaja. I-Navitas Semiconductors isebenzisa le nto kwii-Power ICs zayo (ulawulo lwamandla lweesekethe ezihlanganisiweyo), ezithengisa kubavelisi kwitshaja.
"Sibeka umaleko kwisitya sesilicon esidala kwaye sithatha ukusebenza siye kwiindawo eziphakamileyo ngesantya esikhawulezayo, ukusebenza ngokukuko kunye nokuxinana okuphezulu," utshilo uRobertson.
Amandla abangele iintloko zentloko ngombane ophathwayo ukusukela kusuku lokuqala. Ngaphandle kwesantya esikhawulezayo sokwenza izinto ezintsha kwihlabathi lobuchwephesha, besisebenzisa iibhetri ezifanayo ze-lithium-ion, kunye nazo zonke izithintelo zabo, kangangeminyaka engama-25 ngoku. Oko kuthetha ukuba uninzi lwezixhobo zethu eziphathwayo alunakuhamba usuku ngaphandle kokufakwa ngaphakathi.
Apho siye sabona izinto ezininzi ezintsha kwiminyaka yakutshanje zikwizantya zokutshaja ngokukhawuleza, kodwa ukuhambisa amandla amaninzi ngetshaja zemveli kufuna ukuba zikhulu kwaye zivelise ubushushu obuninzi, obumosha umbane. NgokukaNavitas, iiGaNFast Power ICs zibonelela ngoxinzelelo oluphezulu lwe-3x, iipesenti ezingama-40 zokonga amandla amakhulu, kunye neepesenti ezingama-20 zexabiso lenkqubo.
Ziyahambelana nenkcazo yeQualcomm ekhawulezileyo ye-4.0, enqabileyo ngoku, kwaye kufuneka ilingane neeyure ezintlanu zobomi bebhetri ye-smartphone ukusuka kwimizuzu nje emihlanu yokutshaja. I-GaNFast isebenza kunye nokuhanjiswa kwamandla, kunye neefowuni ezisemgangathweni ezinje ngePixel 3 kaGoogle kunye neelaptops ezinjengeDell's XPS 13 zixhomekeke kuyo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba amazibuko anokubonelela nge-QC 4.0 okanye iPD, hayi zombini njengoko zisaphula ingcaciso ye-USB-C PD.